Khariidadaha Google ayaa ku daraya shaqooyin cusub | Wararka IPhone
Khariidadaha Google ayaa ku daraya shaqooyin cusub
Hore Google war muhiim ah kuma darin khariidadeeda. Laakiin markaad ku darto, waxaad isku dayeysaa inaad adduunka oo dhan ka sameyso, in kasta oo markan kalabar uun ka mid ah labada weyn ee cusub ee lagu daray laga heli karo adduunka oo dhan.
Hawsha laga yaabo inay aad noo xiiso badan tahay waa midda la xiriirta qiimaha shidaalka, laakiin nasiib darro waxaa laga heli karaa oo keliya Mareykanka iyo Kanada. Shaqadani waxay noo oggolaaneysaa inaan raadino saldhigyo gaas oo u dhow meesha aan ka joogno qiimaha shidaalka, si markaa aan u helno saldhigyo gaas oo kala duwan waxaan dooran karnaa midka leh qiimaha ugu dhaqaalaha badan.
Haddii ikhtiyaarkan laga heli doono meel ka baxsan Mareykanka iyo Kanada, waqtiga ayaa sheegi doona, laakiin hadda waa inaan ka faa'iideysan kuwa kala duwan codsiyada noo sheegaya ee ku saabsan qiimaha shidaalka ugu jaban u dhow meesha aan hadda joogno.
Waxyaabaha kale ee cusub ee Khariidadaha Google, waxay na siisaa macluumaad aad u badan oo shakhsi ahaaneed markaan qabanno raadinta adeegyada ama xarumaha iyadoo kuxiran nooca ay yihiin. Tusaale ahaan, haddii aan raadino xafiisyada xafiisyada ee u dhow meesha aan degno, dalabku wuxuu na siin doonaa liis ay ku qoran yihiin dhammaan ganacsiyada u heellan isla hawsha iyo marka aad gujineyso iyaga, codsigu wuxuu na tusi doonaa saacadaha furitaanka aasaaska, oo muujinaya haddii ay furan yihiin waqtigaas ama ay horay u xirmeen waana inaan tagnaa natiijada xigta.
Doorashadan ayaa horey loo heli jiray haddii waxaan ku sameynay raadinta magac ganacsi laakiin maahan markii aan baaritaan ku sameynay qaybo sida kiiska aan ka hadlayno. Ficil xawaareynaya wax badan buu shaqeeyaa markay tahay ogaanshaha meherad ama ganacsi aan tagi karno markaan u baahanahay shay gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Khariidadaha Google ayaa ku daraya shaqooyin cusub
Komishanka Yurub waxay baaraan heshiiska cashuurta Apple ee Ireland